Ọkachamara Semalt: IoT Na Reaper Botnets na Ihe Ọjọọ Na-akpakọrịta na Ha
A na - eji botnets ndị na - emepụta ihe iji wedata ma kwụsị ụfọdụ ọrụ ntanetị, dịka DDOS (Distribution Denial of Services). Ha na-enyekwa ọtụtụ mkpọsa spam. N'ihi na ndị ọrụ enweghị echiche ma ọ bụrụ na ndị na-ewe ihe ubi na-ebute kọmputa ha, ọ dị mfe ka ndị spam na-ezuru data nke onwe gị bụ nke a na-ejikarị eme ihe maka njide ohi.
Nik Chaykovskiy, Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, na-akọwa na ihe kacha njọ bụ cybercriminals na-emepụta botnets ma ree ha na ndị na-ahụ maka ịntanetị. Ha na-eji botnets maka ụfọdụ cybercrimes n'ụwa nile - usar iso camara reflex. The botnets IoT bụ nchịkọta nke ngwaọrụ ndị nwere nsogbu, gụnyere ndị njem, DVR, igwefoto, ngwaọrụ wearable na ọtụtụ teknụzụ na-etinye. Ọ bụ nje virus na-ebutekarị ya na-ahapụ ndị na-ebuso ya agha ma na-arụ ọrụ dịgasị iche ma na offline na online. Ngwaọrụ niile nke IoT nwere nhọrọ nchebe dị mma na njirimara ndị dịka nzere a pụrụ ịchọta, na-eme ka ntinye aha ha na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche maka ohere dịpụrụ adịpụ. Ndị na-eme mkpọtụ na-eme ka ndị ọrụ ahụ ghara imebi ihe ndị ahụ site na mkparịta ụka dị ike ma tinye ọgwụ dịgasị iche iche na malware site na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọrụ ndị na-adịghị ike.
Otu esi achọta ma ọ bụrụ na PC gị bụ akụkụ nke IoT ma ọ bụ onye na-ebute botnets
Ọ dị mfe ịchọta ma ọ bụrụ na kọmputa gị bụ akụkụ nke botnet na ị nwekwara ike ịtụle mmetụta ya na arụmọrụ nke ngwaọrụ gị. Mgbe kọmputa ghọọ mpaghara botnet, ọ na-arụ ọrụ nwayọọ nwayọọ ma ghara ime dị ka ntụziaka gị. Ọzọkwa, ebe nrụọrụ weebụ adịghị arụ ọrụ nke ọma, a na-ejikwa ọtụtụ nza ajụjụ rụọ ọrụ sistemụ gị.
Olee ihe ndị a na-arụ ọrụ?
A na-agwa ndị na-ewe ihe ubi na ndị na-amị ọrụ IoT ịrụ ọrụ ụfọdụ. Ha na-ebutekarị izu ohi ozi nkeonwe dị ka nkọwa kaadị akwụmụgwọ ma ọ gaghị enwe ike ịhụ ya na ndị ọrụ n'ihi àgwà ọjọọ ha. Ndị na-agba chaa chaa nke a maara dị ka botmasters na-ejikarị botnets ndị a eme ihe. Ebumnuche na-achịkwa ndị ọrụ na-achịkwa botnets.
Ihe ize ndụ ndị a na - ejikọta na botnets ndị a.
1. Ha na-eme ka hà bụ ndị ezi omume ma na-etinye aka n'ime ihe ndị ị na-enyo enyo:
Ihe ize ndụ ndị metụtara botnets bụ otu ihe ahụ dịka ihe ize ndụ dị na mmemme obi ọjọọ na arụmụka enyo na ịntanetị. Dị ka ọmụmaatụ, a na-emepụta botnets iji zụọ ozi nkeonwe gị na ịnweta nkọwa kaadị akwụmụgwọ gị. Ha na-enwetakwa ohere inweta ikike ọgụgụ isi gị, akara ngosi, na okwuntughe ma mgbe ụfọdụ ị na-amanye gị ka ị pịa njikọ ha na weebụsaịtị. Ị ga-aghọta na ozugbo kọmputa gị ga - ebute oria, ọ gaghịzi eme dịka ihe ị chọrọ kama ọ ga - arụ ọrụ ndị ọrụ nlekota.
2. Enweghị usoro dị n'etiti kọmputa onwe onye na ụlọ ọrụ kọmpụta na ngwaọrụ mkpanaka:
Usoro n'etiti ụlọ ọrụ na kọmputa onwe onye na-agba ọsọ. Anyị nile nwere ike ịbụ ndị nwere nsogbu botnet, naanị otu ụzọ isi kpochapụ ha bụ itinye usoro mmemme ahụ. Ịchọta ma kwụsịkwa botnet malware bụ naanị ihe ị chọrọ iji hụ na nchekwa gị dị n'ịntanetị. Site na nkà na ụzụ, enwere ike ịkwụsị botnets na mmemme mgbochi ma ọ bụ antivirus. Anyị nwere ike ịkwụsị ọrịa na netwọk netwọk ma nwee ike iwepụ ha n'oge na-adịghị anya